घरमा अचानक बढ्न थालेको खर्चले हालत खराब भयो ? तुरुन्त ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा – Sandesh Press
August 26, 2021 253
वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा राखिने हरेक वस्तुको आ–आफ्नै दिशा हुने गर्दछ। भनिन्छ, हामीले जुन दिशामा सामान राख्छौँ, त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो जीवनमा समेत पर्ने गर्दछ।
खाना खाएपछि भान्सा कोठा कहिले जुठो राख्नु हुन्न । माझ्न नसकेको खण्डमा जुठो भाडाहरूलाई हल्का पानीले पखालेर राख्नुस। जुठो भाडा राख्नले धन हानी हुने गर्छ तथा उक्त जुठो बसी खानाबाट आउने नराम्रो कुराहरुले हाम्रो वातावरणमा नराम्रो असर लाउन सक्छ।
Prevविष्णु माझीकि बहिनीले खोलिन् वास्तविकता, विष्णु माझीलाई सार्वजनिक हुन आग्रह (भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौंमा पठाओ चढेर सुमन यात्रा गर्दै थिए तर ठाउँमा नपुग्दै बीच बाटोमै भएको यो काहालीलाग्दो घटना ! भेटिएको त्यो ग्याङ्ग